Astaanta Shirkadda - Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd.
Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd wuxuu ku yaal Degmada Pingshan, Shenzhen, oo u dhaw Hong Kong iyo Macao, oo leh gaadiid ku habboon. Shirkaddu waa shirkad farsamo yaqaanno sare leh oo leh horumarin, soosaarid iyo iibinta bateriga Lithium Ion ee la soo celin karo, PACK iyo xalka batteriga. Shirkadda waxaa la aasaasey sanadkii 2008, oo daboolaysa 8,000 mitir murabac. Iminka shirkadda waxay leedahay in ka badan 1600 shaqaale, in kabadan 110 kooxda QC xirfadle ah iyo 60 koox farsamo yaqaanno ah. Qayb kasta oo wax soo saar ah laga bilaabo soo iibsiga alaabada ceeriin ilaa shixnadaha alaabta la dhammeeyay waxaa kormeera shaqaalaha QC. Hadda waxaan leennahay waaxda baytariga dhululubo ah, xirmo jilicsan (Li-polymer) waax baytariga, BILAHA batteriga iyo waaxda nidaamka maareynta. Waxsoosaarka 18650 iyo 14500 Lithium ion unugyada ilaa 200,000Ah maalin kasta. Waxaan u isticmaalnaa tikniyoolajiyad sare iyo qalab, ISO 9001 hababka maaraynta sayniska iyo hababka ogaanshaha ee la wanaajiyey, hubinta amniga iyo xasilloonida sheyga. Badeecada baytariga ee SOSLLI waxaa si weyn u soo dhoweeyay macaamiisha caalamka. Waxaan si dhow ula shaqeynaa macaamiisha si aan u siino badbaado, cimri dheeri dheer, alaabada badeecada iyo adeegyada. Macaamiisheenu waxay ka faa'iideystaan ​​alaabada ballaaran ee 'SOSLLI' iyo awoodda farsamo ee batteriga E-bike, batteriga korantada, batteriga kaydinta tamarta, batteriga 3C warshadaha iyo baakadaha warshadaha loo habeeyay. Shayga ayaa si weyn looga isticmaalaa taleefannada smart, laptop, aaladaha webi smart, qalabka IoT, kamaradaha dhijitaalka ah, alaabada Bluetooth, alaabada laydhka, GPS, DVR, E-sigaarka, cadayga ilkaha, E-toy, bangiga korantada, tamarta UPS, qulqulka sareeya RC UAV iyo Robots, AGV, qalab koronto, qalab caafimaad, iwm.
SOSLLI waxay ka gudubtay ISO 9001: 2008 nidaamka tayada iyo shahaadada nidaamka ISO 14001, badeecadeenna batteriga waxaa laga helay UL, CB, IEC 62133, CQC, CE, RoHS, KC shahaadooyin isdaba joog ah, iyo caddeyn laxariirta gaadiidka iyo warbixinta MSDS, UN38.3, Warbixinta qiimaynta qiimaynta gaadiidka iyo bada, iwm.
SOSLLI waxay leedahay nidaamyada samaynta batariyada horumarsan, golaha wasiirada gabowga, qalabka tijaabada BMS, 100v qalabka hadda weyn ee lagu tijaabiyo baytariga batroolka, mashiinka alxamida otomaatiga, mashiinka matal shabaqa tooska ah iyo xarunta tijaabada. Xarunta imtixaanka SOSLLI waxay gaari kartaa: tijaabada amniga, imtixaanka heerkulka sare iyo kan hoose, tijaabada deegaanka, shilka iyo tijaabada acupuncture, tijaabada dhibcaha. Halkaa 66 kooxaha R&D 80 boqolkiiba ayaa injineer sarsare ka ah warshadaha batteriga intaa ka badan 10 sano. Xarunta cilmibaarista iyo hormarinta waxay quseysaa elektironikada, qaab dhismeedka, korantada, tikniyoolajiyadda PACK, PV, iwm
SOSLLI waxay siisaa alaabada batteriga OEM & ODM lithium ion iyo xalalka. Wax soo saarkooda ayaa si balaadhan looga isticmaalaa warshadaha milatariga, dawaynta caafimaadka, maaliyadda, isgaarsiinta, amniga, gaadiidka, macdanta, saadka, bakhaarka iyo qalabka korontada.
Waxaan dhisaa xiriir ganacsi oo wanaagsan oo lala yeesho Panasonic, Philips, Samsung, voltronicpower, Mindry, BOSCH, DJI, Linde, iwm. Macaamiisha gudaha iyo dibedda. Batterigayagu wuxuu leeyahay ilaalin deegaanka ah, badbaado, cimri dheer, awood sare oo faa'iido gaar ah leh.
SOSLLI waxay ku dadaaleysaa marin caalami ah in lagu bixiyo adeegga hal batteriga hal-jooji. Soo dhowow booqashada oo nala soo xiriir.
Unugyada Baytariyada Lithium Ion, Batroolka 20ah Lithium Ion, Battery Lithium Batteriga, Xidhmada Aaladda Batteriga, Xidhmada Aaladda Batroolka Lithium, 3.6v Bathiil Lithium-Ion,